Haweenaydii Loo Doortay Koongarayska Maraykanka Ee Ilhaan Cumar Oo Shaacisay Qorshaheeda Ay Ku Difaacayso Xuquuqda Dadka Qoomu-Luudka Ah | Caroog News
Haweenaydii Loo Doortay Koongarayska Maraykanka Ee Ilhaan Cumar Oo Shaacisay Qorshaheeda Ay Ku Difaacayso Xuquuqda Dadka Qoomu-Luudka Ah
November 8, 2018 - Written by admin
Xogo Layaab Leh Oo Wargeyska FOORE Kasoo Ururiyey Xuquuqda Dadka Qoomu-Luudka Ah Ee Ilhaan Cumar U Ololayso Iyo Siday U Difaacayso
Minneapolis, November 8, 2018- (Foore)- Haweenayda Dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Ilhaan Cumar oo taariikh weyn ka dhigtay waddanka Maraykanka kadib markii ay habeen hore ku guulaysatay Kursigii Aqalka Koongareeska Maraykanka ee ay u ordaysay kana soo baxday xisbiga Dimuquraadiga muddo bandanna lagu xamanayay in ay taageerto dadka u ololeeya in ay is guursadaan dadka isku jinsiga ahi iyo kuwa iska baddala qaabkii qofnimo ee Ilaahay marka hore u abuuray (Ragga naagaha iska dhiga iyo Haweenka ragga iska dhiga) ayaa muddo kooban kadib markii lagu dhawaaqay natiijada Doorashada ee ay ku guulaysatay waxa ay barteeda Xidhiidhka Bulshada ee Internetka ku baahisay qoraal ay ku sheegayso in ay geed dheer iyo mid gaabanba u fuuli doonto sidii ay ugu is-taagi lahayd xuquuqda dadka Qoomu-luudka ah.
Ilhaan Cumar oo 34-jir ah noqotayna gabadha soo labaysa haweenayda Falastiiniyadda ah ee Rashiida oo sidaa ku noqonaya labadii gabdhood ee ugu horreeyey ee Muslimiin ah ee ka mid noqda Golaha Koongareeska Maraykanka ayaa marka laga yimaad hambalyo iyo bogaadin ay in badan kala kulmaysay Soomaalida iyo dadka Afrikaan Ameerikaanka ah ee ku dhaqan dalkaasi Maraykanka kadib waxa si gaar ah diiradda loo saaray Arrintan oo muddoba dad badani si hoose ula socdeen aadna uga walaacsanaayeen, waxaana fajac iyo amakaag noqotay markii ay si badheedh ah baraheeda Xidhiidhka Bulshada ee Facebook, Twitter iyo Instagram ugu baahisay qoraal luuqadda Ingiriisiga ku qoran oo macnihiisu yahay sidan:
“Waxaan ku faraxsanahay dadaalkiina, dhammaanteen waan guulaysanay. Waxa aan ka shaqayn doonaa danaha qoysaskeena iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha caafimaadka iyo guud ahaan Bulshada. Waxaan u dagaalami doonaa sidii aan ubadkeena ugu heli lahayn waxbarasho bilaasha h oo tayo leh oo ka madhan daynta. Waxa aan u dagaalami doonaa sidii aan Qaxootiga wax ula qaban lahaa sidoo kale xuquuqda Haweenka iyo Xuquuqda ay leeyihiin Dadka LGBTQ” ayay barteeda ku faafisay Marwo Ilhaan Cumar.
Aan is waydiinee haddaba Wargeyska FOORE oo arrintan wax ka qoray waxa uu leeyahay, waa maxay LGBTQ?. Waa kelmad ka kooban xarfo la soo gaabiyey oo kelmad kastaa u taagan tahay macnaha eray oo ah sidan: “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer” oo macnahoodu Soomaali ku noqonayo: “Lesbian: Haweenka isku taga. Gay: Ragga Wax Iska Daya ee Qoomu-luudka ah. Bisexual: oo ah dadka sameeya galmada laba qof ah. Tusaale ahaan haweenay ay hal mar u wada tagaan laba nin ama Nin hal mar laba gabdhood galmo la sameeya ama sidoo kale Nin ay laba nin qoomu-luudnimo ula sameeyaan. Xarafka T ayaa isna u taagan kelmadda ‘Transgender’ oo ah dadka qalliinka isku sameeya ee ka guura abuurkoodii hore, tusaale ahaan ragga qalliinka lagu sameeyo ee laga dhigo gabdhaha. Ugu dambayn kelmadda ‘Q’ waxa loo soo gaabiyey ‘Queer’ oo ah dalladda ay ku bahoobeen kooxdani oo ah dallad u doodda xuquuqdooda la xidhiidha in ay sidan yeelaan ama ay dadku xaq u leeyihiin in ay galmo noocan ah sameeyaan ama jinsiga ay doonaan iska dhigaan. waxaana loo yaqaan kooxda QUEER Community (Bulshada QUEER).
Ilhaan Cumar, waxa ay dalka Soomaaliya ka qaxday xilligii dagaallada Sokeeye iyadoo 8 sano jir ah. Muddo afar sano ah ayay ku nooleyd xerada qaxootiga ee Dhadhaab Kenya. Waxay Maraykanka tagtay iyadoo 12 sano jir ah. Sannadkii 2016 ayay u carartay xubin Baarlamaan oo heer State ah waxaana loo doortay xildhibaan Baarlamanka Minnesota ah halka habeen hore loo doortay Xildhibaan ka tirsan Koongareeska heer Federaal ee dal-weynaha Maraykanka.
Ilhaan waxa ay mareegteeda gaarka ah ee Internet-ka oo ciwaankeedu yahay https://www.ilhanomar.com si waafi ah ugu faahfaahsay markii ay kaambaynka ku jirtay qorshayaasheeda ay ugu dooddayso uguna taagan tahay difaacidda xuquuqda kooxdan Qoomu-luudka ee loo yaqaano LGBTQ.
LGBTQ waa urur heer caalami ah oo dalal badan oo adduunka ah ka dhisan gaar ahaan Yurub iyo Maraykanka waxaanay yihiin kooxaha u dooda xuquuqda dadka Qoomu-luudka ah ee raba in ay u wada noolaan iyaga oo isku jinsi ah. Waxaanay codkooda ku dhiibtaan in dawladuhu xeerer lagu ilaalinayo oo lagu taageerayo loo sameeyo. Dhawaan ayay ahayd markii isla Madaxweynaha Marayka laftiisu soo saaray amar ciidamada Maraykanka lagaga mamnuucayo qaar ka mid ah kuwan oo ah kuwa qalliinka isku sameeya ee baddala jinsigooda waxaase aad u taageera xisbiga Dimuquraadiga.